မိန်းကလေးတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် ရိုက်ကူးမှုမျိုးကို အားမပေးဘူးဆိုတဲ့ ပိုပို | Myanmar Cele Tube
Copyright © 2022 Myanmar Cele Tube. All rights reserved.
ပိုပိုကတော့ လက်ရှိ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မျာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဖိနပ်ကြော်ငြာကိုကြည့်ရှုပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် ရိုက်ကူးမှုမျိုးကို အားမပေးဘူးလို့ပြောပြလာပါတယ်။“ အဲဒီ မိန်းကလေးကို ကြည့်ရတာ စိတ်ထဲမှာ မလုံခြုံသလို ခံစားရတယ်။ စိတ်မလုံခြုံတာပေါ့နော်။ အပြင်မှာသာ အဲဒီလို ကိုယ့်ကို ကြည့်နေရင် တော်တော် ဒုက္ခရောက်မှာပဲ ဆိုပြီးတော့ ဆက်မကြည့်ချင်တော့ဘူး။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်ပြီးတော့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးတာမျိုးကို တခြားသူတွေက လက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ ပိုပိုတို့ရဲ့ လူ့ အသိုင်းအဝိုင်းအဝိုင်းကို ဒီလို Message မျိုး မရောက်စေချင်ဘူး။ မဖြစ်စေချင်ဘူး။
အပြင်မှာလည်း အဲဒီလို အငမ်းမရဖြစ်နေတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေလည်း မရှိသလို မလုပ်လည်း မလုပ်သင့်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ အပြင်က အမျိုးသားတွေကလည်း အခုလို အငမ်းမရ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ်လည်း တစ်ခါမှတော့ မမြင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို အပျော်သဘော အနေနဲ့ ကျတော့ သဘောမကျဘူး" လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ယင်း ဖိနပ်ကြော်ငြာကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ထင်မြင်ချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝေဖန်သူတွေ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာတော့ အမျိုးသမီးများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးစော် ကားသော ရိုက်ကူးမှုများ ပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန် နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် ပိုပို ကိုယ်တိုင်ကလည်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒီကြော်ငြာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့ သဘောထားကို အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
" မိန်းကလေးတွေက နောက်စရာ၊ ပြောင်စရာ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ အစကတည်းက ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးတွေကိုပဲ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ခိုင်းနေတယ် သူတို့စိတ်ကိုတော့ သူတို့ မပြင်ကြဘူး။ မိန်းကလေးတွေ လုံခြုံသွားရင် သူတို့ စိတ်လည်း လုံခြုံတယ်လို့ ထင်နေသလား မသိဘူးပေါ့နော်။ ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ တန်ဖိုးလည်း မနိမ့်ကျအောင် မိန်းကလေးတွေရဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း နှိမ့်ချတဲ့ အပြုအမူ ရှိတာမျိုးတွေ ရိုက်တာကိုတော့ အားလည်းမပေးဘူး။ လက်လည်း မခံဘူး။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝက စိတ်ချ လုံခြုံသင့်တယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေကလည်း ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်"လို့ ဆက်လက် ပြောပြလာပါတယ်။
"ဒီလောက်ချေမိုးပြီး စွာတေးလန်နေတဲ့ကျမ အကြောင်းကို ရှင်က စဉ်းစားပြီး ပြုံးတယ်ပေါ့လေ 🌝 ဒါဘာသဘောလဲ ကိုထူးမြတ်ပိုင် 🤨"လို့ဆိုလာတဲ့ အဏ္ဏဝါမုန်း
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ချစ်သူဘဝတုန်းက မိခင်မသိအောင်ခိုးတွေ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေမှုံရတီ
မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင် ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားနေတဲ့ မော်ဒယ် ဝင်းရွှေရည်သင်း
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို လိုအပ်နေတဲ့ PPE ဝတ်စုံများစွာလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ်
"YouTube Video"လေးတွေကြည့်ပြီး မြန်မာ့လက်မှုပညာလေးတွေကို လေ့လာဆည်းပူးနေတဲ့ မော်ဒယ်ဟန်တီ
အဆင်မပြေတဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေကို စားသောက်ဖွယ်ရာတွေ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်တို့ရဲ့ ချွန်တွန်းပရဟိတအဖွဲ့